Gentoo icharega rutsigiro rwekuchengetedza kwepuratifomu yeSPARC | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe isu tisingagashire kazhinji kugamuchira nhau zhinji pamusoro pekuparadzirwa kweGentoo, chokwadi ndechekuti kukura kwayo kunoenderera Isu tichangobva kunzwa nhau dzinoshamisa, zvinoshamisa kune avo vanoshandisa iyo SparC chikuva. Kunyangwe paine chokwadi chekuti kune vashoma vashandisi vanoshandisa chikuva ichi, kuchine vashandisi vanoshandisa chikuva ichi, saka chete rutsigiro rwekuchengetedza kuchikuva ndiyo ichabviswa kwechinguvana.
Izvi zvinoreva kuti mushandisi ane komputa ine SPARC chikuva anogona achiri kuisa Gentoo pakombuta asi timu yekusimudzira inomira kuburitsa zvidzoreso zvekuchengetedza papuratifomu iyi, iyo inoita Gentoo yeSPARC mhando yeWindows XP zvinonhuwira zvemakomputa ekare.
Kuburitswa kwenhau kwakapihwa naYuri German, mutungamiri wechikwata cheGentoo chekuchengetedza uyo akazivisa shanduko kuburikidza runyorwa rwekutumira mukuru. Mune zvinyorwa zviri pamutemo zveGentoo chikwangwani cheSPARC chakatobviswa, kusiya mapuratifomu anotevera, x86, amd64, Alpha, HPPA, PPC (PowerPC) uye PPC64 (64-bit PowerPC), sekutsigirwa nechikwata chekuchengetedza.
Sezvatakambotaura, izvi hazvisiye zvikwata zvine SPARC chikuva chisina Gentoo, asi zvinodaro inotangisa nzira iyo vashandisi vepuratifomu iyi vanenge vasisina kana kugashira zvinyorwa kubva kuGentoo. Kupararira kwakawanda kuri kuwedzera kana kubvisa tsigiro yemamwe mapuratifomu.
Kunyange chiri chokwadi kuti SPARC ipuratifomu iyo migove mizhinji yakatobvisa kubva mukuvandudza kwavo, kuchine kugoverwa senge Gentoo inoitsigira (kana kuitsigira). Chero zvazvingaitika, kana tiine komputa ine Hardware iyi, tinogona inguva yekuchinjisa icho kuve chakasimba uye chazvino michina, kuti izvi hazvingatitadzise kuramba tichishandisa Gentoo, asi kuti zvinodzora kutemwa nemusoro mune isiri kure ramangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Gentoo icharega rutsigiro rwekuchengetedza kwepuratifomu yeSPARC
Zvaive pachena here kuti SPARC ipuratifomu? Kana, mushure mekudzokorora izwi rekuti "chikuva" kagumi nematatu mumitsetse inodarika makumi maviri, mumwe munhu achine kusahadzika, ndinozvidzokorora kwavari. SPARc iri PLATFORM!
Mario Tello akadaro
Wow, zvinoita sekunge chero munhu akanyora chinyorwa anongoda kudzikamisa Linux kudesktop, seOracle / Fujitsu inodyara mamirioni mukutsvagisa uye kuramba ichivandudza SPARC. Ini uyo anga oda kuyedza Gentoo pane "yekare uye isingachashandi M7" pa4.1 GHz 32-musimboti, 256-tambo uye 512GB RAM, ndichafanirwa kuikanda kuti ndiyedze pachikuva i7, pfff. Ichiri kukwikwidza iyo SPARC chikuva asi kufa kwayo kuri padyo vasati vagona kuzvirumbidza mukuita kwepamusoro asi kuyera-kunze kune kuita kukuru pane chidimbu chemutengo
Pindura kuna Mario Tello
7 Mazuva Kufa: kugadzirisa nezvitsva zvemukati